“40 arimood oo aan ka bartay soomaalida Sweden” - iftineducation.com
“40 arimood oo aan ka bartay soomaalida Sweden”
iftineducation.com – Maalintii aan aasaasay bogga Somaliska.com waxaa ka soo wareegtay ku dhawaad 5 sano, iyadoo waqtigaas aan bogga ku qoray ka badan 1500 mowduuc oo inta badan ku saabsan nolosha Soomaalida, socdaalka iyo siyaasada Sweden. Akhristayaasha bogga ayaa iyaguna ku reebay fikrado iyo fariimo ku dhow 20,000 kuwaaasoo isugu jira talooyin, su’aalo, cambaareyn, taageero, jawaabo, qilaaf, duco, iyo kuwo kale. Intii aan ku gudo jiray hawshaan waxaan faa’iday aqoon badan, macriifo badan iyo waayo aragnimo.
Waxaan go’aansaday in aan qoro buug aan ugu magacday “40 arimood oo aan ka bartay soomaalida Sweden”. Kaasoo aan ku soo bandhigi doono 40 mowduuc oo xiiso leh oo ku saabsan xaalada Soomaalida Sweden iyo xalkooda. Buuga ayaa ah mid ku salaysan baaritaan qoto dheer oo aan ku sameeyay xaalada soomaalida ku nool Sweden, oo ay saldhig u yihiin akhristayaasha bogga.
Buugga ayaa noqon doona mid ku qoran Af-Soomaali fudud oo akhristayaashu dhamaan ay wada fahmi doonaan, waxaan ku soo qaadan doonaa mowduucyo xiiso leh iyo talooyin waxtar leh. Hadaba waxaan idinka codsanayaa in aad horay u sii dalbataan buuga, iyadoo taasi ay dardar galin doonto daabacaada buuga.
Muqdisho magaalada aduunka ugu yaabka badnaatay -Daawo
Al Shabaab oo hawada ka saartay Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ee Degmooyinka Baardheere iyo Buurdhuubo